Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Excellency General Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Tha Aung Nyun, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Federal Republic of Nigeria, presented his Credentials to His Excellency General Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria on6October 2015, in Abuja.
Dated. 16 October 2015
ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့် သည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် အဘူဂျာမြို့၌ ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူဟန်မာန်ဒူ ဘူဟာရီ ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ် ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်